Xiddig Hore Oo Liverpool Ah Oo Looga Shakisan Yahay Coronavirus, Halyey Kale Oo Denmark Taariikh Ku Leh Oo Qaadsiiyey Iyo Xogta Meelihii Ay Ku Kulmeen - Jigjiga Online
Xiddig Hore Oo Liverpool Ah Oo Looga Shakisan Yahay Coronavirus, Halyey Kale Oo Denmark Taariikh Ku Leh Oo Qaadsiiyey Iyo Xogta Meelihii Ay Ku Kulmeen
Xanuunka Coronavirus ee dunida ku fadhida waxa u jiifa dad ku dhow 100,000 qof oo ku nool 87 waddan, kuwaas oo badankoodu ku sugan yihiin waddanka China.
Tirada dhimashadu waxay maraysaa 3000 qof, waxaana labada waddan ee uu sida xun ugu faafayo marka laga reebo China iyo Koonfur Korea ay yihiin Talyaaniga iyo Iran oo uu dad badan ku laayay.
Waddanka Iran, waxa la sheegay inuu ku dhacay masuuliyiin ay ku jirto madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiir ku-xigeen, laakiin waddanka Talyaaniga oo dhimashadu caga-cagaynayso 100 qof, waxa uu saamayn ku yeeshay ciyaaraha, iyadoo la sheegay inuu ku dhacay hal ciyaartoy oo koox heerka saddexaad ah iyo saddex kale oo da’yarta Juventus ka tirsan oo karantiil lagu sameeyey markii laga shakiyey.
Hadda waxa soo baxaya in waddanka Netherlands uu ku jiro dalalka uu xanuunkani ku faafayo, waxaana uu ku dhacay saddex ka mid ah tababareyaasheeda loo karantiilay xanuunkan.
Christian Poulsen oo u dhashay Denmark horena ugu soo ciyaaray Liverpool, waxa uu tababare ku-xigeen ka yahay Ajax, waxaana xalay la sheegay in looga shakiyey inuu ku dhacay Coronavirus, oo meel gaar ah lagu hayo isaga iyo laba qof oo kale oo ka mid ah shaqaalaha tababarka kooxdaas.
Poulsen ayaa la sheegay inuu xanuunkan ka qaaday Thomas Kahlenberg oo ay hore ugu soo wada ciyaareen xulka qaranka Denmark oo uu xidhiidh la sameeyey.
Kahlenberg ayaa Axaddii waxa uu u tegay Poulsen si uu ugala qayb-galo xafladda dhalashadiisa 40aad oo ka dhacday Netherlands.
Laba qof ee kale ee kooxda Ajax ka tirsan, waxay kala yihiin Alessandro Schoenmaker oo qof kale oo aan la magacaabin oo labaduba ah tababareyaasha jidh-dhiska.
Afhayeen u hadhay Ajax ayaa sheegay in aanay wali ku arag calaamadaha xanuunkan saddexdan, haddii ay sidaas sii ahaadaanna ay toddobaadka dambe kusoo laaban doonaan kooxda.
Poulsen waxa uu ka ciyaari jiray khadka dhexe, waxaanu usoo dheelay Juventus iyo Liverpool, waxaanu hadda gacan-yare u yahay tababaraha kooxda Ajax, Erik ten Hag oo uu u raacay safarkii Heerenveen usbuucan.
Kahlenberg ayaa isaguna xulka qaranka Denmark u ciyaaray 47 kulan sannadihii u dhexeeyey 2003 illaa 2014, naadiyadana waxa uu u saftay Auxerre oo Faransiis ah iyo VFL Wolfsburg oo Jarmal ah ka hor intii aanu sannadkii 2017 ciyaaraha ka fadhiisanin, laakiin Khamiistii shalay ayaa la ogaaday inuu xanuunkani hayo, waxaana lagu sameeyey karantiil.
Sidoo kale, kooxaha horyaalka kubadda Cagta Denmark ee Brondby iyo Lyngby ayaa karantiilay ciyaartooyo iyo shaqaale ka tirsan naadiyadooda oo la kulmay Kahlenberg,
Previous Turkiga iyo Ruushka Oo Heshiis Ka Gaadhay Dagaalka Ka Socda Suuriya
Next “Soomaalidu Waa Kuwii Inna Badbaadiyey Markii Dhergigu Na Xasuuqayey, Maanta Oo Oromo Talinayso, Waxay Filayeen Inay Xuquuq Helaan” – Jawar Mohammed Oo Si Adag Ugu Jawaabay Abiy Ahmed